ko htike's prosaic collection: ယနေ့မှ စ၍ ပြင်ပါ။
ယနေ့မှ စ၍ ပြင်ပါ။
ဒေါ်စု မွေးနေ့ သံရုံးရှေ့တွင် U2V အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက် ပြောခဲ့သည့် စကားဖြစ်ပါသည်။
(ပုံမူရင်းမှာ NLD(LA) USA ၏ ပိုစတာမှ ရယူထားပါသည်။)
Posted by ကိုထိုက် at 00:29
Pyae Sone said...
military junta = opportunist refugee
21 June 2008 at 14:42
plus FU_CK to all the others people/tribes trying to break away from country even after got free from military reign!
ps: sorry, i m notaracist.
21 June 2008 at 14:45
Great work!! This voice reminds me of general Aung San!!
21 June 2008 at 20:42
ဟေ့ကောင်....အောင်မော် ။ မင်းငထိုက်မြှောက်ပေးတိုင်း
အရူးချီးပန်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့။ ငထိုက်အဖေက S.B
ကဆိုတာ ငါတို့အကုန်သိတယ်။ ဗဟန်းမြို့ 
11 July 2008 at 02:47
25 March 2009 at 14:23